အိုမင်းခြင်း၌ NAD + - အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် (NR) ၏နီကိုတင်းနိုက်ဒီရိုဘိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်အချက်အလက်များ
နီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုစိုက် (NR) နှင့်နီကိုတင်မိုင်ရိုင်ဘိုဇိုက် (ကလိုရိုက်)
Nicotinamide riboside (NR) chloride သည် nikotinamide riboside (NR) ၏ကလိုရင်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
1.Nicotinamide Riboside (NR) ဆိုတာဘာလဲ။
NR သည်ဗီတာမင် B3 သို့မဟုတ် niacin ပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းကို ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ကြီးထွားရန်အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ။ 21 ၏စတင်ခြင်းမှာst ရာစုနှစ်များစွာလေ့လာမှုများအရ NR သည် NAD + ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်လိမ့်မည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဤအာဟာရဓာတ်သည်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုလျော့နည်းစေပြီးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုလျော့နည်းစေသည်၊ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးရိုးဆက်ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
Nicotinamide riboside (NR) သည် NAD + (Nicotinamide adenine dinucleotide) ၏ရှေ့ပြေးအဖြစ် pyridine-nucleoside ဖြစ်သည်။ NAD + သည် DNA ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆဲလ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ circadian rhythm သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအများစုကိုလောင်စာဖြစ်စေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤမော်လီကျူးများသည် senescence ဖြင့်သဘာဝကျဆင်းသည်။
2.Nicotinamide Riboside (NR) ကလိုရိုက်ဆိုတာဘာလဲ။
Nicotinamide Riboside (NR) chloride (NIAGEN) သည် NR နှင့်ကလိုရင်းတို့မှဆင်းသက်လာသည်။ ဒီဒြပ်ပေါင်းသည် NAD + အဆင့်များကိုတိုးပွားစေပြီး SIRT1 နှင့် SIRT3 ကိုသက်ဝင်စေသည်။ ၎င်းသည်အိုမင်းခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းဆိုင်ရာဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊
ယူအက်စ်တွင် riboside ကလိုရိုက် ယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံမှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပရိုတိန်းလှုပ်ခြင်း၊ ဗီတာမင်ရေ၊ သွားဖုံးနှင့်ဆက်စပ်သည့်အရာများတွင်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုထားသောအစားအစာဖြစ်သည် ဖြည့်စွက်.
အရေပြားကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်လူသားများသည်အိုမင်းခြင်းကိုတန်ပြန်သည်။ တစ်ကြိမ်မှာ, သင်အချို့ကိုဖြတ်ပြီးကြရပေမည် Anti-အိုမင်း နက်ရှိုင်းသောမျက်နှာအရေးအကြောင်းများကိုရှင်းလင်းခြင်း၊ သို့သော်ဤကုသမှုများကိုအပြောင်းအလဲမြန်ခြင်းနှင့်ရေတိုဖြစ်ကြသည်။ သေချာစွာအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းအားဖြင့်အိုမင်းရင့်ရော်မှုနောက်ကွယ်ရှိဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အရင်းအမြစ်အကြောင်းရင်းများကိုဖြေရှင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သုတေသီများသည် NAD + အဆင့်နှင့်အသက်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဒီအစွန်းရောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ဟာအိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ဆေးကုသမှုနယ်ပယ်ထဲမှာကိတ်မုန့်အပေါ်အအေးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, riboside ကလိုရိုက်အမှုန့် ဇီဝနာရီကိုမှောက်လှန်ရာတွင်၎င်း၏ထိရောက်မှုကြောင့်လက်တွေ့သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းများ၏စင်္ကြံများကိုမကြာခဏပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Nicotinamide Riboside (ကလိုရိုက်) အမှုန့်၏ဓာတုပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
ထုတ်ကုန်အမည် နီကိုတီနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုက်ကလိုရိုက် (NR-CL) (23111-00-4)
ဓာတုအမည် NRC; 3-Carbamoyl-1-beta-D-ribofuranosylpyridinium chloride; နီကိုတီနိုက်ရိုင်ဘိုကလိုရိုက်၊ 3-Carbamoyl-1- (β-D-ribofuranosyl) pyridinium chloride; 3-carbamoyl-1 - ((2R, 3R, 4S, 5R) -3,4-dihydroxy-5- (hydroxymethyl) tetrahydrofuran-2-yl) pyridin-1-ium chloride; Nicotinamide bd Riboside ကလိုရိုက် (WX900111); NR-CL;
CAS အရေအတွက် 23111-00-4
အပြုံး C1 = CC (= C [N +] (= C1) C2C (C (C (O2) CO) O) O) C) (= O) N. [Cl-]
သိုလှောင်မှုအပူချိန် ကို C ရေခဲသေတ္တာ° -20
လြှောကျလှာ အစားအသောက်ဖြည့်စွက်, ဆေးဝါးလယ်ပြင်
Nicotinamide riboside (NR) ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိရှိခြင်း၊ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာလဲ။
သူတို့နှစ် ဦး စလုံး NAD နှင့် sirtuin 1 ပရိုတိန်းများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေရန်လုပ်ဆောင်ကတည်းကနီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်နှင့်နီကိုတင်မိုင်ရိုင်ဘိုက်ဆိုက်တို့၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအလားတူဖြစ်သည်။
သုတေသနရလဒ်များသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက်နီကိုတင်းနိုက်ရောibosideကလိုရိုက်၏ထိရောက်မှုကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ ၁၀% အထိဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ကောင်းမွန်သောကိုလက်စထရောအဆင့်တိုးမြှင့်စဉ်ဆေးဝါးကိုသောက်သုံးခြင်းသည် LDL ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် triglycerides ၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဟန့်တားလိုက်သောအခါဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်သိပ်သည်းဆနိမ့်သော lipoproteins ထုတ်လုပ်မှုနှေးကွေးသည်။
Nicotinamide riboside chloride သည်ဆီးချိုရောဂါရှိသူအဝလွန်သူများကိုအကျိုးပြုသည်။ ဖြည့်စွက်သည်ဂလူးကို့စ်သည်းမခံမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုတိုးစေသည်
NAD အဆင့်များသည်အနိမ့်ဆုံးသို့ကျဆင်းသွားပါကသင်၏အာရုံကြောစနစ်နှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတို့တွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Alzheimer ရောဂါရှိသည့်လူနာများသည် NAD + နှင့် mitochondria ကမောက်ကမဖြစ်မှုနည်းသည်ကိုပြသသည်။
လက်တွေ့ nikotinamide riboside ကလိုရိုက်အသုံးပြုခြင်းတွင်အိုမင်းခြင်းတွင် neurodegeneration ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ထိပ်ဆုံးမှ ဦး ဆောင်သည်။ ဦး နှောက်အကျိတ်များပျက်စီးခြင်း၊ သွေးကြောဆိုင်ရာလေဖြတ်ခြင်း၊
Nicotinamide riboside chloride အသုံးပြုမှုတွင်မြှင့်တင်ခြင်းပါဝင်သည် ကျန်းမာသော အိုမင်းခြင်း။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်ဆဲလ်တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည့် NAD ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ကြွက်သား၊ အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိဆယ်လူလာစွမ်းအင်ပမာဏကိုမြင့်တက်စေသည်။ ထို့အပြင်နီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်သည်ဤအရေးကြီးသောအင်္ဂါများ၌သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Nicotinamide riboside chloride သည် DNA နှင့်အဟောင်းကိုပျက်စီးစေခြင်းဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇဖွဲ့စည်းမှုကိုအကျိုးပြုသည်။ အကယ်၍ NAD ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကျဆင်းသွားပါကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့် deoxyribonucleic acid သည်အောက်စီဂျင်အမျိုးအစားများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး oxidative stress ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သည်အိုမင်းခြင်းကိုမည်သို့ပြောင်းပြန်လုပ်နိုင်သနည်း။
အိုမင်းနေစဉ်ဆဲလ်ဆဲလ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများပြန်ကျလာသည်နှင့်အမျှခန္ဓာကိုယ်သည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ကြုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခန္ဓာကိုယ်သည် NAD + နှင့် SIRT1 ပရိုတိန်းများကို၎င်းကိုဖန်တီးနိုင်သည့်အရာထက်လျော့နည်းစေသည်။ နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အဝလွန်ခြင်းအပါအ ၀ င်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဤ coenzymes အဆင့်နိမ့်သည် senescence ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်။
nikotinamide riboside ကလိုရိုက်စီမံခန့်ခွဲ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအကျိုးပြုသည် ထိုကဲ့သို့သော lymphocytes နှင့် leucocytes အဖြစ်သွေးကြောများတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်။ ဤဒြပ်ပေါင်းသည် NAD + ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသဖြင့် SIRT1 ပရိုတင်းပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် SIRT1 သည်အရိုးကြွက်သားများ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတစ်ရှူးများသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေခြင်းဖြင့်သွေးကြောဆိုင်ရာအိုမင်းခြင်းကိုနှေးကွေးစေသည်။
ထို့အပြင်နီကိုတင်းနိုက်ရောibosideကလိုရိုက်ဖြည့်စွက်ဆေး အိုမင်းခြင်းကိုပြောင်းပြန် ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း DNA ကိုပြုပြင်အတွက်ကူညီရန်ပိုပြီး NAD + ထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု oxidative စိတ်ဖိစီးမှုကာကွယ်ပေးသည်
ရရှိနိုင်သည့်သုတေသနပြုချက်အရလည်းနီကိုတင်းနိုက်ရိုင်ဗိုဇိုက်ကလိုရိုက်သည်အရိုးသိပ်သည်းဆလျော့နည်းခြင်း၊ မျက်ရည်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေ hypopigmentation ကိုတန်ပြန်သည်။ ဤအခြေအနေအားလုံးသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများကြားတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။
NAD⁺ရှေ့ပြေးများ - Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်နှင့် Nicotinamide Mononucleotide
NAD + ရှေ့ပြေးငါးခုကျော်ရှိသော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရုံကိုနီကိုတင်းနိုက်ရိibosideကလိုရိုက်သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide (NMN).
ဤဒြပ်ပေါင်းနှစ်မျိုးသည်ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတိုးတက်စေရန်နှင့် senescence နှေးကွေးစေရန်ကိုယ်ခန္ဓာရှိ NAD + အဆင့်များကိုတိုးပွားစေသည်။
ဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားထားတာက NMN ဟာဗီတာမင် B3 ပုံစံမဟုတ်ဘူး။ နီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုဆိုဒ်သို့ပြောင်းသည်အထိဓာတုသည်ဆဲလ်ထဲသို့မဝင်ရောက်ပါ။ အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်း၏မော်လီကျူးအရွယ်အစားသည်နီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်အမှုန်ထက်ပိုကြီးသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့် NMN ၏ဇီဝရနိုင်မှုနှင့် NAD + အဆင့်များကိုမြှင့်တင်ရန်အလားအလာသည်သုတေသနနယ်ပယ်တွင်အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှမျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်ဒေါက်တာ Sinclair ၏အဆိုအရ NMN ၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာပြိုင်ဘက်ကင်းသည်။ သူကဒီသုံးပြီးဝန်ခံသည် နောကျဆကျတှဲ, သူ့ကိုနုပျိုနှင့်နုပျိုခံစားရစေသည်။ Sinclair သည် NMN ၏ထိရောက်မှုကိုညီမျှသောပြေးစက်တစ်လုံးထဲတွင်အသုံးပြုသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်ကသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေတယ်၊ ​​ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ရှိစေတယ်၊
အပြန်အလှန်အားဖြင့် Nicotinamide riboside chloride ကိုဆဲလ်ကတိုက်ရိုက်ယူသည်။ မော်လီကျူးသည်ဗီတာမင် B3 အစားထိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် NAD + အဆင့်များကိုလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ၆၀% ကျော်ဖြင့်တိုးပွားစေသည်။ အများဆုံးနှင့်မတူပဲ NAD ရှေ့ပြေးFDA ၏စောင့်ကြည့်စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် nikotinamide riboside (NR) chloride သည် GRAS (ယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောအဖြစ်သတ်မှတ်သည်) အစားအစာထုတ်ကုန်များစာရင်းတွင်ပါဝင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် NAD အမှုန့်ကိုတိုက်ရိုက်မယူ? Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်နှင့် Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည် NAD ကိုကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သောကြောင့်နီကိုတင်းနိုက်ရိုက်ရိုင်ဗိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်သည်အဘယ်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုသင်မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရှိသည်။ သငျသညျစီမံခန့်ခွဲမပေးသင့်ပါတယ် NAD + NIAGEN, NR, NMN ကဲ့သို့သောအလယ်အလတ်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏အခက်အခဲများကိုကျော်ဖြတ်မည့်အစားသင်၏စနစ်သို့တိုက်ရိုက်လား။ ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်တော့်ကိုနီကိုတင်းနိုက်ရိုင်ဗိုဇိုက်ကလိုရိုက်နှင့်နီကိုတင်းနိုက်ဒင်းဒင်းနူကူလွိုက်တေးအကြောင်းပြောပြပါ။
သင် NAD ကိုဘယ်တော့မှတိုက်ရိုက်မယူသင့်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ biomarker သည်ဆဲလ်နှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
nikotinamide riboside chloride နှင့် nicotinamide adenine dinucleotide ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အရာသည်ယခင်သည် plasmic အမြှေးပါးကိုအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်သည်။ ၄ င်း၏စုပ်ယူနှုန်းသည်အစာခြေစနစ်မှတစ်ဆင့်၊ သွေးကြောသို့နှင့်နောက်ဆုံးတွင် ဦး နှောက်သို့ရောက်ရှိသည်။
Nicotinamide riboside (NR) ကလိုရိုက်သောက်သုံးခြင်း - ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
2016 ခုနှစ်တွင် nikotinamide riboside ကလိုရိုက်ဖြည့်စွက် GRAS status ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က FDA က၎င်းအားနေ့စဉ်ဆေး ၁၈၀ မီလီဂရမ်ဖြင့် niacin နှင့်အစားအသောက်ပါ ၀ င်မှုအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်။
လတ်တလောတွင်အမြင့်ဆုံးတရား ၀ င်သော nikotinamide riboside ကလိုရိုက်ပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် ၃၀၀ မီလီဂရမ်အထိရှိသည်။ သို့သော်အချို့သောလူ့စမ်းသပ်မှုများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသည် ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်သုံးနိုင်သည်။ ၅၀၀ မီလီဂရမ်ထက်ကျော်လွန်သောဆေးပမာဏထက်ကျော်လွန်ခြင်းသည်နို့ကိုတင်းမနိုက်ရိုင်ဘိုရိုက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုသင်သတိပြုသင့်သည်။
niacin ဆေးသည်သာသက်ဆိုင်သည် ကျန်းမာသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊ မျှော်လင့်နေသောအမျိုးသမီးများနှင့်နို့တိုက်မိခင်များပါ ၀ င်သည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ - Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ဖြည့်စွက်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသလား။
Nicotinamide riboside ကလိုရိုက်အမှုန့်သည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီး၎င်းသည် GRAS ဒြပ်ပေါင်းများ၏မြင့်မားသောလိုအင်ဆန္ဒကိုရရှိသည်။ ဤအချက်သည်ဒြပ်ပေါင်းတွင်ဆိုးကျိုးမပြပါဟုမဆိုလိုပါ။ ပြီးနောက်၊ ရေသည်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုသင်အလွဲသုံးစားမှုပြုလုပ်သောအခါဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ Nicotinamide riboside chloride သောက်သုံးမှုသည်ဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ nicotinamide riboside ကလိုရိုက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပြင်သင်သည်လည်းတွေ့ကြုံနိုင်ဖွယ်ရှိသည် ကိုယ်အလေးချိန်။ သို့သော်ဤရလဒ်သည်အထူးသဖြင့်သင်အဝလွန်နေလျှင်၊ အဝလွန်နေလျှင်သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းထားရန်ကြိုးစားနေပါကအသှငျပွောငျးသှငျးကောငျးတစျခုဖွစျ၏။
အဘယ်မှာရှိ (NR) Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ဝယ်ယူ?
သင်တစ် ဦး အွန်လိုင်းစတိုးတွင်နီကိုတင်းနိုက်ရိဘိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်ကိုဝယ်ယူနိုင်သည်။ သင်ဟာဆေးဝါးအဆင့်အမှုန့်အမြောက်အများကိုလိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ အစားအစာအဆင့်ဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ခုခုလိုချင်သည်ဖြစ်စေစစ်မှန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုသေချာစွာဂရုစိုက်ပါ။ virtual စျေးဝယ်ခြင်း၏ကောင်းကျိုးမှာစျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖောက်သည်များ၏တုန့်ပြန်မှုများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည်လည်းအတုများအတွက်လဲကျနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာကိုလိုက်နာသည်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူကိုင်တွယ်နှင့် ဓါတ်ဖြည့်စွက်. သင်၏မှာကြားမှုနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Conze, D. , Brenner, C, & Kruger, CL (2019) ။ ကျန်းမာရေးနှင့်အဝလွန်ကြီးသောအရွယ်ရောက်သူများ၏ကျပန်း၊ မျက်မမြင်၊ ရလဒ်များအရရလဒ်များအရ NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) ကိုကာလရှည်အုပ်ချုပ်မှု၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု။ သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများ။
Bogan, KL & Brenner, C. (2008) ။ နီကိုဒိုင်နစ်အက်ဆစ်၊ နီကိုတင်းနိုက်နှင့်နီကိုတီနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုက် - လူ့အာဟာရအတွင်းရှိ NAD + ရှေ့ပြေးဗီတာမင်များကိုမော်လီကျူးအကဲဖြတ်ခြင်း။ အာဟာရ၏နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်။
Mehmel, အမ်, Jovanovic, N. , & Spitz, U. (2020) ။ Nicotinamide Riboside - လက်ရှိသုတေသနနှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုအခြေအနေ။
et al Turck,,, Castenimiller, ဂျေ။ (2019) ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (EU) 2015/2283 နှင့် Nicotinamide ၏ဇီဝရရှိနိုင်မှုနှင့်အညီညွှန်ကြားချက် ၂၀၀၂ / ၄၆ / EC အရအသစ်သောစားနပ်ရိက္ခာအဖြစ်နီကိုတင်းနိုက်ရိibosideကလိုရိုက်၏လုံခြုံမှု။ EFSA ဂျာနယ်။
Elhassan, YS et al ။ (2019) ။ Nicotinamide Riboside သည်သက်ရှိလူသားအရိုးကြွက်သား NAD + Metabolome ကိုတိုးပွားစေပြီး Transcriptomic နှင့် inflammatory Signatures များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆဲလ်အစီရင်ခံစာများ။
အာမန်, Y. , Qiu, Y. , Tao, ဂျေ, & ဖန်, EF (2018) ။ အိုမင်းခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအတွက် NAD + တိုးမြှင့်ခြင်း၏ကုထုံးအလားအလာ။ အိုမင်းခြင်း၏ Translational ဆေးပညာ။
RAW NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) အမှုန့် (၁၀၉၄-၆၁-၇)
RAW LORCASERIN HCL ဖုန်မှုန့် (846589-98-8)
၁။ နီကိုတင်းနိုက်ရိiboside (NR) နှင့်နီကိုတင်းနိုက်ရိiboside (ကလိုရိုက်)
2.Nicotinamide Riboside (ကလိုရိုက်) အမှုန့်၏ဓာတုသတ်မှတ်ချက်
၃။ Nicotinamide riboside (NR) ၏အကျိုးကျေးဇူးများကို သိ၍ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာလဲ။
5.NAD⁺ရှေ့ပြေးများ - Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်နှင့် Nicotinamide Mononucleotide
NAD အမှုန့်ကိုဘာကြောင့်တိုက်ရိုက်မသောက်ပါသနည်း။ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်နှင့် Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
7.Nicotinamide riboside (NR) ကလိုရိုက်သောက်သုံးခြင်း - ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
8.Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ - Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ဖြည့်စွက်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသလား။
ဝယ်မှ 9.Where အစုလိုက်အတွက် (ရော်ဘာ) Nicotinamide Riboside Chloride?